Mgbanwe ChaCha na Mobile dị mma | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 10, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
M (na ndị ọzọ) aghọtaghị n'ezie ChaCha. ChaCha bu odogwu obodo di na Indianapolis ma nweta otutu ego n’azu ya. Aghọtaghị m ihe mere mmadụ ga-eji tufuo ego na igwe nyocha mmadu nwere. Echere m na ọ bụ oke akụ na kpụ ọkụ n'ọnụ na igbu oge… ga-adịrị ọnwụ.
Enwetaghị m ya.
ChaCha mere ihe nke juru m anya. Ha maara ihe ha dị mma na - nsonaazụ ọchụchọ ziri ezi na nke mbụ - ma chọpụta usoro mgbasa ozi ebe ọ kachasị mma iji mee ihe = Mobile. Ha nwere uru nke ụmụ mmadụ n'akụkụ ha ma jiri ha mee ihe n'ụzọ zuru oke, nyocha olu.
ChaCha amaliteghachiri onwe ya, votu kacha mma Mobile ngwa site AT&T na launching ma olu na-adabere na olu na ọchụchọ SMS nke dị egwu.
Anwara m ChaCha n’onwe m, na-ede 242242 ederede ma na-ajụ
Kedu oge na awa ole bụ National Restaurant Association n'afọ a?
N’ime nkeji ole na ole, enwetara m ụbọchị, oge na ebe a na-eme ya - ọfụma nke ọma ma dịkwa mfe ọgụgụ na ekwentị m (Razr).
ChaCha akụziworo m ụfọdụ ihe
Eledala anya na onye ndu nwere ume. Scott Jones nwere afọ iri abụọ nke ahụmịhe ma bụrụ onye ọchụnta ego na-azụ ahịa, onye na-echepụta ihe, onye na-echepụta ihe, na onye isi ike. Echere m na ọ bụ agụụ mmekọahụ nke Scott na ndị otu nwere ọgụgụ isi ọ tinyere n'ọnọdụ mere ka ụlọ ọrụ a nwee ihe ịga nke ọma. Abụghị m onye kwere ekwe, ma ha ji n'aka!
Maka na ụlọ ọrụ anaghị eme nke ọma taata, agụkwala ha echi. Anyị na-ebi n'ụwa a na-akpata nsonaazụ, enweghị ndidi, ọ bụghị? M na-ahụ mmalite, na-ele atụmatụ azụmahịa ha, na-ele ka ha na-agba mgba, echekwara m na ọnwụ dị n'akụkụ nkuku. Eziokwu bụ na nnukwu ụlọ ọrụ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na mgbe ụfọdụ ọ dị ha mkpa ịchọta ụzọ ha. ChaCha na-agagharị agagharị bụ 3M Post-It Note na akwụkwọ m.
Nnukwu ego na-eme ka o nwekwuo ihe ịga nke ọma. Ọtụtụ mmadụ na-eche na, n'ime ọhịa a zuru ụwa ọnụ, onye ọ bụla nwere ike ịghọ onye nwere ntụpọ-nde. Anyị hụrụ akụkọ ndị ahụ n'anya ma gụọ ha ebe niile. Eziokwu bụ na ọ ka na-ewe ego iji mee ego.
Echere m na m na-enwere obere anyaụfụ maka ego dị egwu nke ChaCha nwere site na ụdị Scott, (Jeff) Bezos njem na Simon Equity Ndị Mmekọ. Ekwenyesiri m ike na, n'ihi ego ụfọdụ ntụpọ-coms nwere, enwere m ike iwulite azụmaahịa na-aga nke ọma na ụfọdụ ndị enyi m na echiche anyị. Kedu otu onye ọchụnta ego nke na-enweghị ihe onwunwe ga-esi nweta ohere dị ka ụmụ okorobịa a?
Enwere m olileanya na m ga-ahụ Scott ụbọchị ụfọdụ wee jụọ ya. Ka ọ dị ugbu a, aga m anọgide na-eji akwara nke m eme ka echiche m gaa nwayọ nwayọ na ịdị uchu. Ikekwe m ga-enweta nkwado site na Cisco.
Ma ọ bụ enwere ike m ederede 242242.
Tags: njikwa ndị ahịaIzu gara agandu nduSocial Media Marketingstephen coleyteleportwordPress nbanye menuWordPress mkpirisi
Eventbrite: Ihe omume mere n'ezie mfe
Ndị na-eme achịcha Todd
Daalụ maka kudos Doug!
Lelee isiokwu a. Anyị meriri onyinye AT&T 'Fast Pitch' maka mmepe ekwentị.
Ọtụtụ ọrụ siri ike na izu / ọnwa ndị gara aga gwụchara na onyinye a… nnukwu mmeri anyị!
Ahụrụ m nke ahụ, Todd - ekele! Enwere m olileanya na m ga-enweta ohere iji gaa ChaCha ụbọchị ụfọdụ wee hụ ndị otu gị.
Doug (na Todd, na Scott Jones),
M na-anọdụ ala na MIRA Awards na-ekpe ikpe ma ju m anya ka m na-agụ nrubeisi afọ a maka nyocha mkpanaka. Doug, a na m ekwughachi echiche gị niile - ọ bụ ihe ha mere. M nwalere ya na Mọnde gara aga ka m kụrụ weebụ na-anwa ịchọpụta oge egwuregwu ikpeazụ NCAA malitere n’abalị ahụ. Mgbe enweghị m ike ịchọta ya ngwa ngwa, ekpebiri m mgbe e mesịrị idegara ChaCha akwụkwọ ozi wee nweta ya ihe na-erughị nkeji 2! Chei, nke ahụ dị mma. Enwere m ike ịhụ nke a na-arụ ọrụ ka ndị mmadụ na-eme njem, chọrọ ozi dị mkpa ozugbo, wdg.
Ugbu a, lee ajụjụ m chọrọ ịjụ Scott. Etu esi enweta ego na ihe nlere a? Ebee ka usoro ego ha si enweta? Paysnye na-akwụ ndị nduzi ahụ?
N'ikpeazụ, amaghị m uru ọ na-enye, mana enweelarị m akaụntụ ChaCha ma nwee ike ịga n'ịntanetị, tinye nọmba ekwentị m, wee hụ akụkọ ihe mere eme nke ajụjụ m na azịza ha dị mma.
Nke a ga-atọ ụtọ ikiri.
Akwa post Doug.
M soro ChaCha ruo afọ ole na ole, ma aghọtaghị ya nke ọma. Nduzi mmadu na - eduzi - dika i kwuru bu oru / ihe siri ike ma si otua, jiri nwayọ. Achọrọ m inye ya mkpado pụrụ iche… “Chere…. Ọ bụ Google. ” Ebe ọ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla m gbalịrị ya, ọ nyere m otu nsonaazụ dịka Google… naanị bụ 10X oge ahụ.
Agbanyeghị - ozugbo m gụrụ ọnwa ole na ole gara aga, ha 'na-abawanye' na ekwentị - amam na 'ọkwa' na-abịa na ha na-etinye akwa ha niile n'ime nkata a. Kemgbe ahụ, enwere m obi ụtọ n'iji ụdị mobile.
Ihe kacha masị m bụ ajụjụ nzuzu m - “Gịnị bụ ndụ?” M laghachiri - ““gwa ndị enyi gị niile gbasara ChaCha.”
Ugbu a nke ahụ dị mma!